မိစိမ်း…. (စ.ဆုံး) – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on October 19, 2020 Author admin	Comments Off on မိစိမ်း…. (စ.ဆုံး)
တစ်နေ့သောအခါ ရန်ကုန်မြို့နဲ့များစွာမဝေးလှသော ဆင်ခြေဖုန်းဒေသရှိ အိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်၏ရှေ့တွင် တက္ကစီတစ်စင်း ဆိုက်ရောက်လာကာ ကားပေါ်မှ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦး အထုပ်အပိုးတွေနှင့် ဆင်းလာ ပါသည်။ ထိုလူငယ်လေးသည် ကားခကိုရှင်းပေးရင်း အထုပ်အပိုးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မနိုင်မနင်းဆွဲလာကာ အိမ်ရှေ့ အရောက်တွင် “ မေမေရေ..မေမေ..သားပြန်လာပြီ ” လို့ အသံပြုလိုက်ရာ အထဲမှ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပြေးထွက် လာပြီး “ မေမေကြီးရေ ကိုကြီး ပြန်လာပြီ ” လို့ ဆိုရာ ကိုကြီးလို့ အခေါ်ခံရသော ထိုလူငယ်လေးသည် လာကြိုသော ကောင်မလေးအား နားမလည်သလို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး “ ဟဲ့..နေစမ်းပါဦး..နင်ကဘယ်သူလဲ ” “ ဟို.. ဟို… ” “ ပြောလေ နင့်ကိုငါအရင်တစ်ခေါက်က မတွေ့ပါဘူး ”
လို့ မေးခွန်းထုတ်နေတုန်း “ ဟယ်.. ငါ့သားလေး ပြန်လာပြီတော်.. ဒီတစ်ခါတော့ ငါ့သားလေးနဲ့ မခွဲရတော့ဘူး ” လို့ ဆိုကာ အားရဝမ်းသာဖြင့် ဖက်ကာ အိမ်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန် လက်ကိုဆွဲလိုက်တုန်း “ နေပါအုံး..မေမေရ..သူက ဘယ်သူတုန်း ” “ ဝင်စမ်းပါအေ.. အထဲရောက်မှ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြမယ်.. လာ.. လာ ” လို့ ဆိုကာ အတင်းဆွဲခေါ် သွားသဖြင့် သူလည်း ကောင်မလေးကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့အထုပ်တွေကို အိမ်ပေါ်တင်နေတာကို တွေ့လိုက်တော့ သူလည်း အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ သားအမိနှစ်ယောက် စကားတွေ အားရအောင် ပြောနေကြရင်း မေမေက “ သားကိုပြောရအုန်းမယ်.သူကမိစိမ်းတဲ့ ပဲခူးကလေ မေမေ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းရဲ့ သမီးပေါ့ ” “ သူကဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ ” “ ဒီလိုကွယ့်သားရဲ့ သူအဖေက ဆင်းရဲလို့ မေမေ့သူငယ်ချင်း မိဘတွေက သဘောမတူလို့ အဆက်ဖြတ်ထားကြတာ။ သူတို့ကလည်း မဆက်သွယ်ကြဘူးလေ။ ပဲခူးဖက်မှာ ဇာတ်မြုပ်နေ ကြတယ်လေ။ ဟိုမှာဆိုတော့ သိပ်မရှိကြဘူး။ သူ့အဖေက သူငယ်ငယ်လေးထဲက ဆုံးတာ။ သူ့အမေဆုံးခါနီး မေမေ လိုက်သွားတော့ သူ့အမေက သေချာမေမေ့ကို အပ်သွားတာ။ မေမေလည်း မွေးစားလိုက်တယ်ကွယ်။ မေမေလည်း အဖော်ရအောင်ပေါ့ ” ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဟာ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မမှာ မွေးချင်းမရှိခဲ့တာမို့ အစ်ကိုတစ် ယောက်ရပြီ ဖြစ်တာကြောင့် တကယ်ပဲ အားကိုးအားထား ပြုမိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကြီးကတော့ ကျွန်မကို တစိမ်းဆန်လွန်း ပါတယ်လေ။ တစ်နေ့ ကျွန်မတရေးနိုးတော့ သေးပေါက်ချင်တာနဲ့ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာရင်း ကိုကြီးအခန်းထဲက မီး ရောင်ပျပျလေး တွေ့လိုက်လို့ အခန်းဘက်ကို အသာလေး ကြည့်လိုက်တော့ တံခါးလေးကလည်း နည်းနည်းလေး ဟနေ တာမို့ အထဲကမြင်ကွင်းကို ရှင်းရှင်းလေး တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
အို ကိုကြီးတစ်ယောက် Portable လေးနဲ့ အပြာကားတွေ ကြည့်နေပါလား။ နားကလည်း နားကျပ်တပ်ထားလို့ ကျွန်မ ဆင်းလာတာကို သူမသိတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မလည်း ဒိတ်ခနဲရင်တွေဖိုသွားပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ ထွက်သွားရင် ကောင်းမလား။ ဆက်ကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ ဝေခွဲနေရင်းက တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ မြင်ကွင်းမို့ ဆက်ကြည့်ဖို့ကိုပဲ စိတ်ကစေခိုင်းတာကြောင့် အသာလေးပဲ ဆက်ကြည့်နေမိ ပါတော့တယ်။ အခွေထဲမှာတော့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အမေရိကန်တစ်ယောက် အဝတ်အစားဆိုလို့လုံးဝမရှိကြပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နမ်းနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ကျွန်မမှာဖြင့် ရင်တွေတလှပ်လှပ်ဖြစ်ရင်း ကိုကြီး ပဲ သိသွားမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ ပါဝင်နေမိပါတယ်။ အမေရိကန်ကြီးက နမ်းနေရင်းက ဂျပန်မလေးရဲ့ နို့လေးနှစ် လုံးကို ပါးစပ်နဲ့တစ်လှည့် စီစို့ပေးလိုက်နေတာကို ကြည့်နေရင်း ကျွန်မလည်း ရင်ထဲမှာ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ဝေဒနာ တစ်ခုကိုစတင်ခံစားမိလာပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်မရဲ့နို့တစ်လုံးပေါ်ကို အသာလေး တင်လိုက်မိရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ထောင် နေတာကိုထိမိတော့ နည်းနည်းလေး ရှိန်းတိန်းတိန်း လေးဖြစ်သွားရပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း နို့စို့ခံချင်နေတဲ့စိတ် တွေပေါ်လာပါတယ်။ နောက်တော့ ခွေထဲကလူကြီးဟာ ကောင်မလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လျှာကြီးနဲ့အားရပါးရ ယက်ပေးနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အောက်ကကောင်မလေးလဲ ခေါင်းကိုဘယ်ညာယမ်းလို့ ပါးစပ်လေးဟစိ ဟစိ ဖြစ်နေတာကို ကြည့်နေရင်း ကျွန်မလည်း အဖုတ်လေးကို ယောင်ပြီးလက်နဲ့ စမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ အို ကျွန်မအဖုတ်မှာလည်း အရည်တွေ စိုလို့ပါလား လက်ဖျားလေးကလည်း စောက်စေ့လေးကို ပွတ်မိတာမို့ တော်တော်လေး အရသာ တွေ့နေရပါတယ်။
လူကြီးလည်း အားရအောင် ယက်ပေးပြီးနောက် အသာထကာ သူ့ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးကို ကောင်မလေးအားစုပ်ခိုင်း နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုကြီးလည်း လုံခြည်ကို အောက်ဖြေချလိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးကိုလက်နဲ့ အသာဆုပ်ကိုင်ကာ အပေါ်အောက် ကစားပေးနေတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ အို ကိုကြီးဟာကလည်း အကြီးကြီးပါလား။ အထဲက စုံတွဲကလည်း တော်တော်လေးကို ခရီးပေါက်နေပါပြီ။ လူကြီးလည်း ကောင်မလေးကို ပက်လက် ဆွဲလှန်ကာ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ်လေးထဲ သူ့လီးကြီးကို မဆန့်မပြဲထည့်ကာ မညှာမတာ ထိုးသွင်းနေတာကို တွေ့လိုက်မိတော့ ကျွန်မသာဆိုရင် ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ပွတ် ဆွဲနေမိပါတယ်။ စိတ် ထဲမှာလည်း ကိုကြီးရဲ့လီးနဲ့သာ ကျွန်မကိုလုပ်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ စဉ်းစားမိလိုက် ပါတယ်။
ကောင်မလေးက အသည်းအသန် အော်ဟစ်နေပေမယ့် လုံးဝညှာတာမှုမရှိပဲ တလစပ် ထိုးသွင်းနေတာကို ကြည့်နေရင်း ကောင်မလေး နေရာဝင်ပြီး အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာပါတယ်။ ကိုကြီးလည်း တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ အရှိန်ကပိုမြန်လာပါတယ်။ အော် ကိုကြီးရယ် မိစိမ်းကိုကြီးလီးကြီးကို စုပ်ပေးပါရစေ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးပါ ပေါ်လာပါတယ်။ လက်ကလည်း အကွဲကြောင်းလေးထဲကို အသာလေးထိုးထည့်ကြည့်တော့ တော်တော်လေး ကောင်းလာ တာမို့ ကျွန်မလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ခပ်သွက်သွက်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေမိပါတယ်။ တအောင့် လောက်ကြာတော့ ကောင်မလေး ဗိုက်ပေါ်ကို လူကြီးကသူ့လီးထဲကအရေတွေပန်းထုတ်လိုက်တာကိုတွေ့ လိုက်ရင်း ကိုကြီးတစ်ယောက်လည်း သူ့လီးထဲကအရေတွေ ထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်မလည်း အထဲက ဆစ်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီးဖေါ်မပြနိုင်တဲ့ အရသာတစ်မျိုးကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကိုကြီးမိသွားမှာ ကြောက်တာကြောင့် ချက်ခြင်းပဲအခန်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ အခုန်မရပ်သေးပါဘူး။ ကျွန်မရင်ထဲက ဆန္ဒတွေကိုဖြေဖျောက်ဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံကို စဉ်းစားနေရင်း တစ်နာရီလောက်နေတော့ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမတော့ ကိုကြီးနဲ့ကျွန်မပျော်ပျော်ကြီး လိုးလိုက်ကြ တာ အိပ်ယာနိုးတော့ ဒေါသလေးတွေတောင် ဖြစ်ရပါတော့တယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကျွန်မကိုကြီးမျက်နှာကိုတောင် ရဲရဲမကြည့်ဝံ့ပါဘူးရှင်။ သူပဲသိသွားမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ် စိတ်လေးတွေကြောင့်ပေါ့။ ကိုကြီးကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပါဘဲလေ။
ထုံးစံအတိုင်း အေးတိအေးစက်နဲ့ပေါ့။ သူက သာ နေနိုင်တာ မနေနိုင်သူကတော့ ကျွန်မပေါ့။ ကိုကြီးနဲ့ ချစ်ခြင်တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်၊ မွေးစားအကိုဆိုတဲ့ အသိ စိတ်က တစ်ဖက် နဲ့လွန်ဆွဲနေကာ ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက်နဲ့မို့ အလုပ်လုပ်နေတာတွေ အလွဲလွဲ အချော် ချော် ဖြစ်နေရပါတယ်။ တစ်နေ့ မေမေကြီးက နောက်ဖေးမှာ ပစ္စည်းယူခိုင်းတော့ မနိုင်တာကြောင့် “ ကိုကြီးရေ ခဏလောက် ဒီမှာမနိုင်လို့ ” ဆိုကာ လှမ်းခေါ်လိုက်တော့ ကိုကြီးလည်း ကမန်းကတန်း ပြေးဝင်လာရင်း အနားရောက်လာတုန်း ပုံးကကြိုးစကို ခလုတ်တိုက်မိကာ ကျွန်မပေါ်ကို ထပ်လျက်လဲကျသွားပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကိုကြီးကို လှမ်းဆွဲလိုက်ရာ ကိုကြီးလုံခြည်စကိုသာဆွဲလိုက်မိတာကြောင့် ကိုကြီးလည်း လုံခြည်ကျွတ်ကာ လီးတန် ကြီးကို အနီးကပ် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ထို့အတူ ကိုကြီးကလည်းအရှိန်လွန်ကာ ဆွဲမိဆွဲရာလှမ်းဆွဲမိရာ ကိုကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာ ကျွန်မနို့ပေါ်ကို လာအုပ်နေပါတော့တယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရှက်ရွံ့မှုတွေ အားနာမှုတွေနဲ့အတန်ကြာအောင် ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ အဲဒီအချန်မှာ “ ဟဲ့ ကြာလိုက်တာ. ဒီမှာ ၀ယ်သူစောင့်နေတယ် ” လ့ိုမေမေကြီး လှမ်းခေါ်တော့မှ လူချင်းခွဲလိုက်ပါတယ။် နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်မ ခံစားချက်တွေဘယ်လိုမှမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုကြီးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အေးတိအေး စက်နဲ့ဆိုတော့ ကျွန်မအသည်းတွေပါ ယားနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း မိန်းမတို့တတ်အပ်တဲ့ မာယာတွေကို တိုက်စစ်ဖွင့်ကာ အသုံးချရပါတော့တယ်။ တစ်ညနေ ကိုကြီးဆိုင်စောင်နေတုန်း ကျွန်မကိုကြီးနောက်ကနေ ကိုကြီးလက်မောင်းလေးကို ကျွန်မနို့တွေနဲ့ ထိအောင်တမင် ဖက်လိုက်ရင်း “ ကိုကြီး မိစိမ်းကို MP4 လေးတစ်လုံးလောက် ဝယ်ပေးပါလား ” “ ငါ့မှာ ပိုက်ဆံသိပ်မပိုဘူး ”
လို့ဆိုကာ လက်မောင်းလေးကို မသိမသာလေး ရုန်းပါတယ်။ ကျွန်မလည်း တမင်တကာ လက်မောင်းကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားရင်း “ မရဘူးကွာ ဝယ်ပေး မဝယ်ပေးရင် စိတ်ကောက်လိုက်မှာနော် ” လို့ ပြောလိုက်ရင်း ကိုကြီးလက်မောင်းနဲ့ နို့လေးကို တမင်ပွတ်လိုက်ရင်း ကိုယ်ကိုယိမ်းပေးလိုက်ရာ ကိုကြီးတစ်ယောက် တံတွေးတွေ မျိုချနေတာကိုတွေ့ နေရပါတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း အသာလေး ပြန်ခွာပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ ကိုကြီးတစ်ယောက် ကျွန်မ ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေ မရိုးသားတော့ပါဘူး။ လူလစ်ရင်လစ်သလို မကြာခဏ ခိုးခိုးကြည့်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကိုကြီးရှေ့မှာဆိုရင် တတ်နိုင်သ လောက် ခပ်နွဲ့နွဲ့လေး မသိမသာလေး လုပ်လုပ်ပြနေရတာ အမောပေါ့။ ကျွန်မဖက်ကလည်း မိန်းကလေးကစရမှာမို့ မဝံ့မရဲနဲ့ပေါ့ သူကလည်း ညီမလေး တစ်ယောက်လို သဘောထားတော့ စောင့်ထိန်းနေတာလည်းပါမှာပေါ့။ ဘာတွေများစောင့်ထိန်း နေတာလည်းကိုကြီးရယ်၊ ဒီကအဖြစ်ကို မသနားတော့ဘူးလား။ ဒီမှာတိတ်တခိုးလေး ချစ်နေရတာကို သူမသိချင် ယောင်ဆောင်နေတာလား။
သိရက်နဲ့ မစဝံ့တာလား ကိုကြီးရယ်။ တစ်ညတော့ မေမေကြီးအပေါ်မှာ ဘုရားရှိခိုးနေတုန်း ကိုကြီးတစ်ယောက်အောက်ထပ်မှာ ထိုင်နေတုန်း ကျွန်မ ကိုကြီးရင်ခွင်ထဲ ဖြုန်းဆို ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း “ ကိုကြီး စိမ်းကိုလေ မနက်ကျရင် မြို့ထဲကိုလိုက်ပို့ပေးပါလား ” လို့ပြောကာ ကိုယ်လုံးလေးကိုလည်း ကိုကြီးရင်ခွင်ထဲ ရောက်အောင် အသာလေးတိုးကပ်နေလိုက်ပါတယ်။ “ ဟာ ငါမအားဘူးကွာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်သွား ” လို့ ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ပြောနေပေမယ့် သူ့ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေ တာကို ကျွန်မအတိုင်းသား ကြားနေရပါတယ်။ “ အို မဟုတ်တာ လိုက်ပို့ရင်ပို့ပေး မပို့ပေးရင်ငိုလိုက်မှာနော် ” လို့ပြောကာ ကိုယ်လုံးလေးကိုနွဲ့ကာ ကိုကြီး အသည်းတွေ ယားလာအောင် ပဲနည်းနည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးတစ်ယောက်လည်း တံတွေးတွေ တဂွတ်ဂွတ်နဲ့ မျိုချကာ ကျွန်မခါး အောက်နားလောက်မှာ ပူနွေးတဲ့အထိအတွေ့ တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ “ မိစိမ်း နင်သွားတော့ဟာ ငါတကယ် မအားလို့ပါ ” လို့ပြောလိုက်တော့ “ မရဘူး မရဘူး မပို့ပေးရင်မဖယ်ဘူး ” လို့ ပြောလိုက်ရင်း နောက်ကိုနည်းနည်းလေး တိုးကပ်ပေးလိုက်ရာ ကိုကြီးတစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေ ပိုမြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ “ အေးပါကွာ ပို့ပေးပါ့မယ် အခုတော့ဖယ်အုံး ငါရေချိုးရအုံးမယ် ” လိုက်ရင်း ကျွန်မ လည်တိုင်လေးကို မသိမ သာလေး ခိုးနမ်းလိုက်တာကို သိလိုက်ပါတယ်။ “ ဟေး ဒါမှတို့ကိုကြီးကွ ” လို့ ပြောကာ ကိုကြီးပါးလေးကို နမ်းလိုက်ရင်း အသာလေးပြေးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အိပ်ယာထဲရောက်တော့ ဒီနေ့ကိုကြီးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အထိအတွေ့အကြောင်းလေးတွေပဲ စဉ်းစားနေရင်း တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့မပျော်ပါဘူး။ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ သေးပေါက်ချင်လို့အောက်ကိုဆင်းလာရင်း ကိုကြီးအခန်းထဲက မီးရောင်တွေ့တော့ သူဘာတွေများလုပ်နေလည်း အပြာကားကြည့်ရင်လည်း ချောင်းရအောင်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့အသာ လေးချောင်းကြည့်လိုက်ရာ အထဲမှာခွေတော့ဖွင့်ထားပါတယ်။ ကိုကြီးလည်းမရှိပါလား။ အမှန်တော့ ကိုကြီးရှိပါတယ်။ အိမ်သာထဲကထွက်လာပြီး အိုက်လို့အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ခဏထိုင်နေရင်းပြန်အလာ မိစိမ်းတစ်ယောက် အခန်းထဲကို ချောင်းနေတာကိုမြင်တော့ ခဏတော့ရပ်ကြည့် နေလိုက်ပါတယ်။ သူလည်း သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ စဉ်းစားနေရင်း စောစောကကြည့်ထားတဲ့ အပြာကားအရှိန်နဲ့မို့ စိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်တွေ ဝင်လာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် မိစိမ်းနောက်ကို အသာလေးကပ်သွားပြီး ပါးစပ်လေးကို အသာလက်ဝါးလေးနဲ့အုပ် လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မလည်း သူခိုးလူမိဖြစ်သွားတာကြောင့် မျက်နှာတွေပါ ပူထူသွားပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကြီးနဲ့အခု လို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့လိုက်တော့ ကိုကြီးခံစားနေရတာကို ချက်ခြင်းသဘောပေါက်လိုက်ပြီး ကိုကြီးခေါ်ရာ အခန်းထဲကို မငြင်းဆန်ပဲ လိုက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကိုကြီးက ‘ချစ်တယ်စိမ်းရယ်’ လို့ဆိုကာ ပါးပြင်လေးကို နမ်းလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မလည်း ကျေနပ်ပီတိတွေနဲ့ ကိုကြီးကိုသာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေး ဖက်ထား မိပါတယ်။ တုန်ရီနေတဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုကြီးက သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေနဲ့ စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက်ချိန်မတော့ အို ကျွန်မအသည်းတွေအူတွေ ပြောင်းပြန်လန်သွားမတတ်ပါပဲ ကိုကြီးရယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မလည်း ကိုကြီးရဲ့အနမ်းကြမ်း ကြီးကိုပြန်ပြီး တုန့်ပြန်လိုက်ပါ တော့တယ်။ ကိုကြီးရဲ့လက်တွေကလည်း ညဝတ်အင်္ကျီအောက်က အတွင်းခံမဝတ် ထား တဲ့ကျွန်မနို့အုံလေးကို ဖွဖွလေးညှစ်ပေးနေတော့ ကျွန်မလည်း ကိုကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုင်နိုင်အောင် အင်္ကျီကို မတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးလည်း ကျွန်မကိုခုတင်ပေါ်အသာလေး လှဲချရင်း ကျွန်မအဝတ်တွေကို အကုန်ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်မမျက်နှာပေါ်ကို အုပ်မိုးလိုက်ရင်း ပါးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက် လည်တိုင်လေးကို စုပ်ပေးလိုက် နဲ့တစ်စစ အောက်ကိုဆင်းလာပြီး လွတ်လပ်နေတဲ့ကျွန်မနို့လေးတွေကို စတင်စို့ပေး လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမှာလည်း ရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေကာ အရသာတွေ့လှတာမို့ ကိုကြီးလည်ပင်းကိုသာ တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ဖက်ထားမိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ကျောပြင်ဟာလည်း အိပ်ယာနဲ့လွတ်ထွက်နေပါတယ်။ ကိုကြီးကနို့စို့ပေးနေရင်း လက်တစ်ဖက်ကလည်း စောက်ဖုတ်လေးကို အုပ်ကိုင်ကာပွတ်ပေးနေရာ ကျွန်မမှာ အကြာထဲမှာ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ကောင်းလှတာမို့ စောက်ဖုတ်က အရည်ကြည်လေးတွေပါ လိုက်လာပြီး ပါးစပ်ကလည်း တအင်းအင်း တအဲအဲနဲ့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ကိုကြီးလည်း အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြီး အရည်တွေ လဲ့နေ တဲ့ ကျွန်မစောက်ပတ်လေးကို လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ ယက်ပေးလိုက်ချိန်မတော့ ကျွန်မမှာနတ်ပူးသလို တဆတ်ဆတ် တုန်ရီနေပါ တော့တယ်။ #achityathasarpay “ အား…အ…အား…ကိုကြီးရယ်…ကောင်းလိုက်တာ ” လို့ပြောကာ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို သေချာ ဖြဲပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးလည်း စောက်ခေါင်းထဲကိုလျှာထိုးထည့်ကာ အထဲမှာမွှေနှောက် ကစားပေးနေ ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ စောက်စေ့လေးကို ထိုးကော်ပေးနေရာ ကျွန်မရင်ထဲက ကလီစာတွေပါ ပြုတ်ပါသွားမတတ် ခံစားနေရပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်မဘယ်လိုမှ တောင့်မထားနိုင်တော့ပဲ ကိုကြီးခေါင်းကိုအတင်းဆွဲကပ်ကာ တစ်ချီ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့မှ ကိုကြီးလည်း ကျွန်မပေါင်ကြားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်မစောက်ပတ်အဝကို သေချာချိန်ပြီး ဖြည်းဖြည်းလေး စသွင်းလိုက်ပါတယ်။ “ အ..အ..ကို…ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ..နာတယ် ” လို့ပြောကာ ကိုကြီးလက်မောင်းလေးကို ဖက်ထားမိပါတယ်။ “ နည်းနည်းတော့ အောင့်ခံနော် ” လို့ပြောကာ တစ်ဝက်လောက်ပဲသွင်းပြီး လက်မလေးနဲ့ စောက်စေ့ကို ပွတ်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မမှာ နာကျင်မှုတွေပါ ပျောက်ပြီး အရသာတွေ့လှပြီမို့ ကိုကြီးရဲ့ လီးဆက်သွင်းနိုင်ဖို့အရေး အောက် ကနေ နေရာလေးတောင် ပြင်ပေးလိုက်ကာ အလိုက်သင့်ပေါင်လေးက ကားပေးနေမိပါတယ်။ ကိုကြီးလည်း ကျွန်မနှုတ် ခမ်းလေးကို စုပ်ယူလိုက်ရင်း ခါးလေးကိုအသာကြွကာ အဝမှာတေ့နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို နည်းနည်းအား ထည့်ကာ သွင်းလိုက်သည်မို့ ကျွန်မရဲ့ အပျိုမှေးလေးကိုထိုးခွဲကာ စောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် တင်းတင်း ကြပ်ကြပ်ကြီးကိုဝင် သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်မမှာလည်း စောက်ဖုတ်ထဲကို မတန်တဆ အသွင်းခံထားရတာမို့ အသည်းတွေ ခိုက်လောက်အောင် နာကျင်နေမိပါတယ်။ အသက်တောင်မှ မှန်မှန်မရှူနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုကြီးရဲ့ အနမ်းအရှိုက် အကိုင်အတွယ် အပွတ်အသတ်တွေရဲ့ အောက်မှာ တရှိန်းရှိန်းနဲ့ ဖီလင်တွေတက်လာတာမို့ အနားမပေးပဲ ဆက်တိုက်ထိုးသွင်းနေတဲ့ ကိုကြီးရဲ့ လီးဒဏ်ကို အံကြိတ်ခံကာ ကိုကြီးခါးကို တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိပါတယ်။ အချက် ၁၀၀ လောက်ဆက် တိုက် ညှောင့်ပေးနေရင်းက ခဏနားကာကိုကြီးက “ စိမ်း…ကောင်းလားဟင် ” “ အင်း ” “ ကိုကြီးကိုရော ချစ်လား ” “
မေးနေဖို့လိုသေးလို့လားကွယ်..ကိုကြီးနေနိုင်တယ်နော်.ဒီမှာဖြင့်တိတ်တခိုးချစ်နေရတာ သေတော့မယ် ” “ မတော်ဘူးထင်လို့ပေါ့ ကလေးရယ် ” “ တော်လားမတော်လား အခုလက်တွေ့ပဲလေ ” “ သိပါပြီဗျာ..ကဲပြန်စကြစို့ ” လို့ဆိုကာ ကျွန်မပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းကာ အားရှိပါးရှိ လိုးပေးပါတော့ တယ်။ “ အ…အ…အ…အင်း…အင်း…အင်း..ကောင်းလိုက်တာကိုရယ် ” ကိုကြီးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေ ထိမိလွန်းတာမို့ ကျွန်မလည်းခဏလေးတောင်ရပ်သွားမှာကို မလိုလားတာကြောင့် ကိုကြီးဆောင့်လိုက်တိုင်း စည်းချက်ကျကျ ကော့ကာ ကော့ကာပေးနေရင်း ကိုကြီးလီးဝင်လာတိုင်း ကျွန်မအထဲကနေ ကြွက်သားလေးတွေနဲ့ ကျွန်မအားရှိသလောက်ညှစ်ကာပေးနေမိပါတယ်။ ကိုကြီးလည်းအချက်ပေါင်း ၃၀၀ လောက် ဆက်တိုက် လုပ်ပေးနေရင်း နောက်ဆုံးကျတော့ ကျွန်မသားအိမ်ထဲကို ပြွတ်နဲ့ထိုးသလို သုက်ရည်တွေကို ပန်းထည့် လိုက်ရင်း ကျွန်မပေါ်ကို မှောက်ကျသွားပါတော့တယ်။ ကျွန်မမှာလည်း ရှိသမျှအကြောတွေ ဆိမ့်သွားပြီး ကာမအရသာထူးကြီးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားမိလိုက် တာမို့ ကိုကြီးနဲ့အပြိုင်ပြီးသွားခဲ့ကာ ကျွန်မစောက်ရည်တွေကော ကိုကြီးသုက်ရည်တွေပါပေါင်းကာ စောက်ပတ်ကနေ ဖင်ကြားတစ်လျှောက် စီးဆင်းသွားပါတော့တယ်ရှင်။ တစ်ချီပြီးတော့နှစ်ယောက်သား မောသွားကြပြီး ကိုကြီးက အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်လှန်ကာ စီးကရက်သောက် နေပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကိုကြီးရင်ဘတ်ပေါ်ကို ခေါင်းလေးတင်လိုက်ရင်း ကိုကြီးရင်ဘတ်ကိုအကြောင်းမဲ့ ပွတ်သပ် နေပါတယ်။
အတော်ကြာတော့ ကိုကြီးက “ စိမ်း…ချစ်ရဲ့လား.. ” “ ဟုတ်ကဲ့ ” “ ဒါဆို..နောက်တစ်ခါလောက်ဆွဲလိုက်ရအောင် ” “ ရပါ့မလားကိုကြီးရယ် အထဲကတော်တော်အောင့်နေတယ် ” “ ရပါတယ် နောက်တစ်ခါဆို မနာတော့ဘူး ” “ ကြောက်တယ် ” “ မကြောက်ပါနဲ့ မနာစေရဘူး ” “ ဖြည်းဖြည်းတော့လုပ်နော် ” “ အေးပါ..ငါ့ဟာကိုလည်းနည်းနည်းကလိပေး ” လို့ခိုင်းလိုက်တော့ ကျွန်မလည်း ပျော့ခွေနေတဲ့ကိုကြီးလီးကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပေးလိုက် ဂွေးဥကိုသာသာလေး ညှစ်ပေးလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရာ နည်းနည်းမာချင်လာပါတယ်။ ကိုကြီးက “ စိမ်းလေး…စုပ်ပေးနော် ” လို့ပြောရင်း ပါးလေးကို နမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပြလိုက်ရင်း ကိုကြီးလီးကို အရင်းကနေကိုင်ရင်း ဒစ်ဖျားလေးကိုငုံကာ စုပ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ “ အား..ကျွတ်..ကျွတ်..စိမ်းလေးရယ် ” လို့ ပြောကာ ကျွန်မဆံပင်လေးတွေကို ဖွပေးနေပါတော့တယ်။ ကျွန်မလည်း ရေခဲချောင်းစားသလို စုပ်ပေးနေရင်း ကိုကြီးက “ စိမ်းလေး လျှာလေးနဲ့ပါ ကစားပေး ” လို့ပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်မလည်း လီးစုပ်နည်းကို သိသွားပြီး ကိုကြီး ပြောသလို ကျကျနနလေးစုပ်ပေးလိုက်ရာ ကိုကြီးလည်း မနေနိုင်တော့ပဲ ကျွန်မနောက်ကနေ စောက်ဖုတ်လေးရှိရာကို မျက်နှာ အပ်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲလျှာထည့်ကာ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား အတော်လေးကို အပေးအယူမျှတစွာ လုပ်ပေးနေတာမို့ ကျွန်မလည်းကောင်းလာတာမို့ ကိုကြီးမျက်နှာကို စောက်ဖုတ်နဲ့ ပွတ်တိုက်ကာ တစ်ချီပြီးသွားတာကြောင့် ကိုကြီးမျက်နှာမှာအရည်လဲ့နေပါတယ်။
ဒီတော့မှ ကိုကြီးက ကျွန်မကိုရှေ့နည်းနည်းတွန်းထုတ်လိုက်ပြီး လေးဘက်ကုန်း အနေအထား ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင် ပေးလိုက်ရင်း ကျွန်မနောက်ကနေ အကျအနနေရာယူကာ နောက်ကိုပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်အဝကို သူ့လီးနဲ့ တေ့လိုက်ရင်း ကျွန်မခါးလေးကိုလက်နဲ့အသာထိန်းကာ ဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ စောစောက နာတာလေးတွေ နည်းနည်းပြန်ပေါ်လာတာမို့ ကျွန်မလည်း ခါးလေးပါကုန်းသွားပြီး အိပ်ယာခင်း ကို တင်းတင်းဆုတ်ကာ အံကြိတ်မိလိုက်ပါတယ်။ ကိုကြီးက တဖြည်းဖြည်းမြန်လာတာမို့ တစ်စစနဲ့အရသာ တွေ့လာ ပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုကြီးက ကျွန်မကျောလေးကို လျှာလေးနဲ့ အသာလျှက်လိုက်ရင်း ကျောပေါ်ကိုထပ်လိုက် ကာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ချိုင်းအောက်ကနေ နို့ကိုလှမ်းဆွဲကာညှစ်ပေးရင်း ဂုတ်သားလေးကိုပါ စုပ်ပေးလိုက်တာမို့ ကျွန်မ လည်း အရသာပေါင်းစုံကို တစ်ပြိုင်နက်ခံစားရကာ ကိုကြီးစိတ်ကြိုက်ဆောင့်နိုင်အောင်ဖင်ကို ကုန်းသထက်ကုန်းပေး နေမိပါတယ်။
“ အား..အား..အား..ကို..ကောင်းလိုက်တာ ” ကိုကြီးကလည်း ခါးကိုပြန်ကိုင်လိုက်ရင်း ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းလေးတွေ ဆောင့်ပေးနေရင်း လက်ချောင်းလေး တွေကလည်း စအိုဝကိုပါ ကလိပေးနေတာမို့ ကျွန်မဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ပဲ ခွေခေါက်ကျကာ တစ်ချီပြီးသွား ပါတော့တယ်။ ကိုကြီးကလည်း ခဏအနားပေးထားပါတယ်။ လီးတန်ကိုတော့ မချွတ်ဖူးပေါ့။ “ စိမ်း..ကောင်းလား ” လို့ မေးတော့ ကျွန်မခေါင်းလေးပဲ ည်ိတ်ပြနိုင်ပါတယ်။ နောက်မှ “ ကို..ပြီးချင်ပြီလား ” “ အေးကွာ.. စိမ်းပါးစပ်ထဲမှာပြီးချင်တယ်.. ရမလား ” လို့ ပြောလိုက်ရင်း အိပ်ယာပေါ်ကို ပက်လက်လှန် ပေးပါတယ်။
ကျွန်မလည်း ပြန်လှည့်ကာ ကိုကြီးပေါင်ကြားထဲ နေရာယူလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို စုသိမ်းလိုက်ရင်း ကိုကြီးဂွေးစိ အောက်ပိုင်းကနေ ဒစ်ဖျားအထိ သိမ်းကာဆွဲပေးလိုက်ရာ “ အား..လား..လား..ချစ်လိုက်တာ..ကလေးရယ်..ကျွတ်..ကျွတ်..ကျွတ် ” ကျွန်မလည်း ဒစ်ကနေစပြီး ပါးစပ်ဆန့်သလောက် ငုံပေးလိုက်ကာ လျှာနဲ့အထဲမှာ စိတ်တိုင်းကျ ကလိပေး နေရင်း လက်ကလည်း ဂွေးဥနှစ်လုံးကို ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“ စိမ်းလေးရယ်..ကောင်းလိုက်တာကွာ ” လို့ပြောကာ ကျွန်မခေါင်းလေးကို ကိုင်ထားပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို တင်းတင်းလေး ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ရင်း ကိုကြီးလီးတန်ကို အပေါ်အောက် ဂွင်းတိုက်သလို လုပ်ပေးလိုက်ရာ “ အ..အ…အား..စိမ်းရယ်..လုပ်လုပ်..ကိုထွက်တော့မယ် ” ကိုကြီးအသံလေးတွေဟာ ကျွန်မကို အားပေးနေသလို ဖြစ်လာတာကြောင့် ကျွန်မလည်း ခပ်သွက်သွက် လေး လုပ်ပေးလိုက်ရာ နောက်ဆုံး ကိုကြီးတစ်ယောက် ကျွန်မအာခေါင်ထဲကို သုက်ရည် ပူပူနွေးနွေးတွေ ပန်းထည့် လိုက်ရင်း ခါးလေး ကော့တက်လာကာ ငြိမ်ကျသွားပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကိုကြီးကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ ပြတဲ့အနေနဲ့ ကိုကြီးဆီကထွက်လာတဲ့ သုက်ရည်တွေကို တစ်စက်မကျန် မျိုချလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်…….။
ညက တညလုံး အိပ်မရတာ အတော်ကို ဆိုးတယ်ရှင်။အိမ်ထောင်သည် ဘဝမို့ အလိုလို တောက်လောင် လာတဲ့ ကာမမီးကို ငြိမ်းမရတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့။ကျမနာမည် ဇာဇာလှိုင်ပါ အသက်က ၃၇ထဲမှာ အိမ်ထောင်ရှိတယ် အိမ်မှာပဲ ကုန်စုံဆိုင် ဖွင့်ထားတာပါ အလှကုန် ပစ္စည်းရော မုန့်မျိုးစုံရော အဝတ်အထည်တွေပါ အစုံရောင်းတယ်။ ကျမယောင်္ကျားက ကိုအောင်ထွေး အသက်က ၄၂ထဲမှာ ကျမထက် ၅နှစ်ထဲ ကြီးပေမယ့် ဆီးချိုဝင်တော့ လူက တဖြည်းဖြည်း ပိန်လာပြီး အားအင်မရှိတော့ သလိုပဲရှင်။မရှက်တမ်း ပြောရရင် ကျမတို့ မလိုးဖြစ်တာ ၆လလောက်ရှိပြီ အိမ်ထောင် စကျကတည်းက ကိုထွေးနဲ့ မီးကုန်ရမ်းကုန် လိုးခဲ့တဲ့ကျမ ညဘက်ဆို သွေးသားဆန္ဒက တောင်းတော့တာပဲ။ ကိုထွေးက အရင် ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်ပြီး မြို့ထဲ ကယ်ရီလိုက်တာ။ရောဂါဖြစ်တော့ ကားရောင်းပြီး […]
ဇော်ရဲသည် ရန်ကုန်မှာမွေးသော ရန်ကုန်သားတယောက်၊ ရန်ကုန်ကနေ အေ၀းသင်နှင့် ဘွဲ့ရထားသူ။ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ဗလတောင့်တောင့်။ အသားကခပ်လတ်လတ်၊ ရည်းစားရယ်လို့ အတည်တကျမထားဘဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ထည်လဲတွဲတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးနုနုရွရွလေးတွေကိုတော့ အနမ်းလေးတွေပေးရုံ ရှော်ပင် ထွက်ရင်တွဲကောင်းရုံမျှသာနေတတ်ပြီး၊ ခပ်ကဲကဲတွေနှင့်ဆိုလျှင်တော့ သူကလည်း ကဲပေးလိုက်သည်။ သူ့မိဘတွေက အဖေက ဌာနတခုက ညွန်မှူးတယောက် အမေက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင် ရတနာကုန်သည်တယောက်။ တဦးတည်းသောသား ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချောဆိုတော့ အကောင်ကြီးကြီးသမီးတွေကအစ လက်ထပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းသည်ကိုတောင် ခံရသူ။ သို့သော် အိမ်ထောင်ကျသွားလျှင် ဆုံးရွုံးသွားမည့် လူပျိုအခွင့်အရေးတွေကို သူကောင်းကောင်းသိသည်။ ဒါ့ကြောင့် အမေကိုပူဆာ၊ အဖေ့ပါဝါကိုသုံးပြီး ပန်းဆိုးတန်းလမ်းပေါ်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်အကြီးကြီးတခုကို သူဖွင့်လိုက်သည်။ သူဆိုင်ဖွင့်ပြီး ၃ လလောက်အတွင်း ဆိုင်နာမည်က တရှိန်ထိုးတက်လာသည်။ သူ့ရဲ့ပြောဆိုတတ်မွု၊ သူ့ရုပ်ရည်ကြောင့် အမျိုးသားဖောက်သည်တွေထက် အမျိုးသမီးဖောက်သည်တွေက […]
မေ့မရတဲ့အန်တီလေး နဲ့ အတိတ်ကဇာတ်လမ်းတစ်ခု ကို အမှန်အတိုင်းပဲ ရေးထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေဖြစ်ခဲ့တာက အဖေနဲ့ အမေ တစ်လကြာမယ့် ခရီးတစ်ခုကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ အန်တီလေးက အိမ်စောင့်ပေးဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ လာနေပေးတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေပါ။ သူက ညီမလေးကိုလဲ အဖော်အဖြစ် လာနေပေးတာပါ။ အဲ့အချိန်တုံးက သူ့အသက်က လေးဆယ့်ငါး နှစ်ကျော်နေပေမယ့် အတော်လေး အရွယ်တင်တဲ့ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ပါ။ အဒေါ်တွေထဲမှာ အငယ်ဆုံးဆိုတော့ တူ တူမ တွေ ရဲ့ အချစ်ဆုံးပါပဲ..။ ခုအချိန်ထိလဲ သူက အပျိုတွေလေးတွေကို လိုက်ပြီး အလှပြိုင်နေတုံးပါပဲ။ သူလာနေပေးတော့ အိမ်မှာလဲ ပျော်စရာတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် ကိုလဲ ဂရုစိုက်သလို လိုချင်တာ မှန်သမျှလည်း ၀ယ်ပေးတတ်ပါတယ်။ ညဖက်ဆိုရင် ညဉ့်နက်တဲ့အထိ မအိပ်ပဲ ဂိမ်းဆော့နေတတ်တဲ့ […]
၂၂ ရကျနမှေ့ာ ငှကေပျြ သိနျးခြီတဲ့အပွငျ အခွားသော ဆုမဲမြားစှာကို ကံစမျးမဲ ဖောကျပေးမယျ့အကွောငျး ပွောပွလာခဲ့တဲ့ စမိုငျးလျ